SD6N Bulldozer |
Gurguurta SWMC-370-DTH kala sooc
Cagaf-cagafeedka SD6N waa 160 hoos-nooc dozer ah oo wata baabuur si toos ah hawo-mareenka, hakin adag oo adag iyo kontaroolada haydarooliga. Waxay ku qalabaysan tahay mashiinka naaftada ee Shangchai C6121 oo lagu soo saaray shatiga Caterpillar. Matoorku waxa uu leeyahay sifooyinkii kaydka torque-ga weyn...
Cagaf-cagafeedka SD6N waa 160 hoos-nooc dozer ah oo wata baabuur si toos ah hawo-mareenka, hakin adag oo adag iyo kontaroolada haydarooliga. Waxay ku qalabaysan tahay mashiinka naaftada ee Shangchai C6121 oo lagu soo saaray shatiga Caterpillar. Matoorku waxa uu leeyahay sifooyinkii kaydka torque-ga weyn iyo awoodda ka dhanka ah culayska xad-dhaafka ah. Beddeliyaha torque-ga waa beddele makaanik-biyoodka oo awooddiisu bannaanka u qaybsan tahay, kaas oo leh sifooyinka baaxadda waxtarka sare ee ballaaran. Isteerinka iyo bareegga waxa lagu xakamayn karaa kabaal kontorool oo isku mid ah. Nidaamka bareegga wuxuu adeegsadaa qaab-dhismeed kor u qaadis ah, kaas oo ku habboon oo badbaadinaya shaqada. Gear-ga u dambeeya waxa uu leeyahay sifooyinka qiimaha isku-xidhnaanta barokaca. Naqshadaynta noocan ahi waxay kor u qaadaysaa awoodda wax-qabadka waxayna kordhisaa wakhtiga faa'iidada leh. Dareewalka kama dambaysta ah wuxuu sidoo kale ka faa'iidaystaa qaab-dhismeedkiisa in nadiifintiisu ay xor ka tahay hagaajinta, taas oo ku habboon adeegga. Bar barbaraha ayaa adeegsada qaab-dhismeedka saliidayn bilaashka ah si loo dhimo qiimaha adeegga.
● Tilmaamaha ugu muhiimsan
Miisaanka hawlgalka (ay ku jirto ripper) (Kg): 16500
Cadaadiska dhulka (oo ay ku jiraan ripper) (KPa): 55.23
Qiyaasta raadraaca (mm): 1880
Min. banaynta dhulka (mm): 445
Awoodda dhallinta (m): 4.5
Ballaca daabka (mm): 3279
Max. qoto dheer qodista (mm): 592
Guud ahaan cabbirrada (mm): 503732973077
Kacaanka la qiimeeyay (rpm): 1900
Awoodda duuliyaha (KW/HP): 119/162
Max. wareegga (Nm/rpm): 770/1400
Isticmaalka shidaalka ee la qiimeeyay (g/KWh): 215
Nooca: raadku waa qaab saddex xagal ah.
Sprocket-ka sare ayaa laastikada ah oo la hakiyay: 7
Tirada rollers track (dhinac kasta): 2
Dhererka (mm): 203
Ballaca kabaha (mm): 560
Gear 1aad 2aad 3aad
Horey (Km/h) 0-4.0 0-6.9 0-10.9
Dib u dhac (Km/h) 0-4.8 0-8.4 0-12.9
Hirgelinta nidaamka hydraulic
Max. cadaadiska nidaamka (MPa): 15.5
Nooca bamka: Gears oil bamka
Nidaamka wax soo saarkaL/min: 178
Beddeliyaha Torque: Ka baxsan isku darka kala soocida
Gudbinta: Planetary, gudbinta shift tamarta oo leh saddex xawli hore iyo saddex xawaarood oo rogaal celis ah, xawaaraha iyo jihada si dhakhso ah ayaa loo rogi karaa.
Xajinta isteerinka: Saxanka biraha awooda saliida badan ee disc oo lagu cadaadiyo guga. Haydarooliga ku shaqeeya.
Xajinta biriiga: Brake waa saliid laba jiho oo sabaynaysa band brake oo uu ku shaqeeyo baydalka cagta ee farsamada.
Wadista kama dambaysta ah: Darawalka kama dambaysta ahi waa laba-dhimista oo leh qalabka wax-soo-saarka iyo qaybta sprocket-ka.
Hore: TY160-3 Buldozer
Xiga: TS160-3HW Buldozer
Buldozer Ilaalinta Kaymaha
Bulldozer qashinka qashinka
SD7 Buldozer shaqo badan